Ukugxila kwiFirefox, isikhangeli esigxile kubucala | IPhone iindaba
Ubumfihlo bungumcimbi oqhubeka ukhathaza abasebenzisi abaninzi. Kwi-intanethi akukho nto yasimahla, akukho nto, zonke iinkonzo ezinikezelwa simahla, ezinje ngeenkonzo zeposi okanye iibrawuza ngaphandle kokuqhubeka, ukurhweba ngedatha yethu ukujolisa kwintengiso ngokusekwe kwii-imeyile zethu okanye kwimbali yokukhangela esiyenzayo. Ukongeza, ii-cookies ezidumileyo zivumela amaphepha ewebhu ukuba azi malunga nezinto esizithandayo, ukusetsha, okanye ezona zinto zisithandayo. Ngaphandle kokuba sikhangele ngokungaziwa ngokupheleleyo, amaphepha ewebhu esiwatyelelayo aya kuhlala enolwazi ngathi.
IFirefox ibisoloko ingomnye wabakhuseli babucala kwimfihlo kwaye isikhangeli sayo sisinika iindlela ezahlukeneyo zokuba sikwazi ukuhamba ngaphandle kokushiya naluphi na umkhondo, kodwa uninzi lwabasebenzisi abangafuni kubenza nzima ubomi babo bekhangela iindlela ezisinika zona. . Ukwenza oku, inike igama kwakhona ukusetyenziswa kwayo ukuvimba umxholo, ukuwuguqula ube ngumkhangeli ojolise kubucala babasebenzisi, kwaye ibizwa ngokuba yiFirefox Focus, isikhangeli esizenzekelayo iibhloko naluphi na uhlobo lwesicelo esivela kumaphepha ewebhu esiwacelayo, ukuze ungazi nangaliphi na ixesha ukuba sikhangela ntoni, sithanda ntoni okanye ngaphandle kokuqhubeka apho siceba ukuya khona kwiholide elandelayo.
Ukugxila kwiFirefox ikwabonelela ngeqhosha lokufikelela ngokukhawuleza ngalo sinokucima yonke imbali yethu yokukhangela, ukukhangela, ii-cookies (ukuba sibamkele) kunye neepassword esizingenisileyo kwinkonzo efuna ukungqinisisa. Ukongeza, ikwavumela ukuba uvimbe umkhondo wentengiso, undwendwele ii-analytics, iiplagi zonxibelelwano zentlalo ezonwabisayo ezithi zicothise ukulayishwa kwamaphepha kakhulu, iifonti ezizodwa abanokuzisebenzisa ...
Zonke ezi zinto zenza ukuba isikhangeli esitsha sibe lolona khetho lufanelekileyo ukuba sifuna ukukhangela i-intanethi ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo. Njengomkhangeli weFirefox, ugxininiso lweFirefox luyafumaneka ukhuphelo simahla ngekhonkco elingezantsi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Ukugxila kwiFirefox, isikhangeli esigxile kubucala
Ungakunyusa njani ukuthembeka kwe-Apple Watch rate rate esweni